अस्पतालले १४ घन्टा पहिल्यै मृत घोषणा गरेकी महिला बचाउन वैद्यको रातभर उपचार ! आखिर मा … | imagenepalnews.com
३७ बर्षीया दुर्गा लामिछानेलाई चिकित्सकले बिहीबार बिहान ९ बजे मृत घोषणा गरिसकेका थिए। दाङको तुलसीपुर उपमहानगपालिका वडा नं. ११ प्रि-गाँउस्थित माईती घरमा बसेर स्थानीय एक विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएकी लामिछानेलाई घरको पिँढीमै विषालु सर्पले बिहान साढे ७ बजे डसेको थियो।
मृतक दुर्गाका भाइ लोकराज लामिछानेले सर्पले डसेको थाहा पाउने वित्तिकै दिदीलाई मोटरसाईकलमा दौडाएर तुलसीपुर १२ जसपुरमा एक जना व्यक्तिबाट विष चुसाउन लगे।
एम्बुलेन्स नआउन्जेल विष चुसे पनि बिरामीको अवस्था झनै गम्भीर भएकाले दिदीको उपचारको लागि घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पाल पुर्‍याए। तर, अस्पताल पुर्‍याए लगतै चिकित्सकले दुर्गा लामिछानेलाई मृत घोषणा गरे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख एवम् डिएसपी रामप्रशाद घर्तीले सबै सञ्चारमाध्यमलाई त्यही खबर दिए।
एकै छिनमा त्यो खबर सबै तिर फैलियो। खबर सार्वजनिक भए लगतै दुर्गालाई आफन्तले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेका थिए।
तर झारफुक गर्ने वैद्य तथा गुरू (कथित सपेरा) भनाउँदाले अस्पतालले मृत्यु घोषणा गरेका व्यक्तिमा अझै प्राण छ भन्ने दाबी गरे। सर्पले टोकेका व्यक्तिलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरे पनि २४ घन्टासम्म बचाउन सकिन्छ भन्ने जिकिर गरे।
त्यही विश्वासमा दुर्गाका पति र भाइ तथा आफन्त परे। सकभर को आफन्तलाई लाउँलाउँ र खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा आफन्त गुमाउने चाहना हुन्छ र?
दुर्गाका आफन्तलाई दाङको भालुवाङ तथा कपिलबस्तुसम्म पुर्‍याउँदा झारफुकमार्फत बचाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाइएको थियो। त्यही विश्वासमा परेर आफन्तले दुर्गाको शवलाई घोराहीदेखि झन्डै एक डेससय किलोमिटर टाढा कपिलबस्तु जिल्लासम्म पुर्‍याए। तर, त्यहाँ वैद्य र गुरुवाहरुले भनेझैं झारफुक गर्ने मानिस भेटिएनन्। अन्त्यमा उनीहरुले मृतकलाई कपिलबस्तुको नेपाली सेनाको गणमा लगेर उपचार गराउन प्रयास गरे।
त्यहाँ पनि नेपाली सेनाका चिकित्सकले दुर्गाको पहिले नै मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्दै फर्काइदिए।
सर्पदंशबाट ज्यान गुमाएकी दुर्गाको घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ जमुनीमा पर्छ। दुर्गालाई त्यहाँ ल्याइपुर्‍याउँदा बिहीबार दिउँसो झन्डै पौने चार जति बजेको थियो। तर, फेरि स्थानीय केही झारफुके वैद्य र गुरूवा भनाउँदाले दुर्गाको अन्तिम संस्कार गर्न रोक लगाए।
अन्तिम संस्कारको लागि तुलसीपुर १६ स्थित कालोखोला किनारमै दुर्गाको शव लगिए पनि त्यही उपचार गरेर बचाउँछौं भन्ने दाबी गरे।
परिवारजन तथा आफन्तले पनि त्यो दाबीलाई नकार्न सकेनन्। त्यसपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नामुद भनिएका वैद्य, धामी, गुरूवाको जमघट खोलामै भयो। ठाउँ ठाउँबाट उनीहरूलाई त्यहाँ जम्मा गराइयो।
मुर्दाको उपचार हुँदैछ भन्ने सुनेपछि कालोखोलाको किनारमा रातिनै त्यहाँ पुग्ने मानिसको संख्या ठूलो थियो। व्यर्थैको उपचार प्रयास भइरहँदा कतिपयले बेकारको प्रयास नगर्न सुझाए पनि त्यो रोकिएन।
मृतक दुर्गा लामिछानेलाई जीवत तुल्याउन व्यर्थैको भ्रम युक्त प्रयास सफल हुनै कुरै थिएन। अन्ततः उनको शुक्रबार बिहान तुलसीपुर १६ स्थित कालोखोला किनारमा अन्तिम संस्कार गरिएको भाइ लोकराज लामिछानेले जानकारी दिए।
१४ घन्टा पहिलै अस्पताले मृत घोषणा गरिएकी महिलालाई बचाउन भन्दै कालोखोला किनारमा व्यर्थैको उपचार प्रयास गरिरहेका कथित वैद्यहरु।
तस्बिरः नारायण खड्का ।
आयो खुसिको खबर // रबि लामिछाने बारे प्रेस काउन्सिलको प्रेस बिज्ञप्ति